Avy Any Arzantina Ny Papa Vaovao, Jorge Bergoglio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2013 23:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Aymara, Deutsch, Italiano, polski, Magyar, 繁體中文, 简体中文, English
Ilay kardinaly Zezoita avy any Arzantina, Jorge Mario Bergoglio, no Papa vaovao ho an'ny Fiangonana Katolika. Manomboka ny 13 Martsa 2013, ho fantatra amin'ny anarana hoa Papa François i Bergoglio.
Avy any Buenos Aires, nanoratra i Rodrigo Hernán Torres (@RodrigoH_Torre) [es] hoe :
@RodrigoH_Torre:#Bergoglio no papantsika, ARAHABAINA! Ary mirary soa rehetra ho azy aho amin'ity fanamby vaovao sy làlana izay vao miandoha, mandritra ny fotoana manan-tantara ity.
Maro tamin'ireo mpampiasa Twitter no nampifandray ny vaovao tamin'ny baolina kitra, toa an'i Aaron Zamost (@zamosta) izay mitanisa ny “tànan'Andriamanitr'i” Diego Armando Maradona:
@zamosta; Papa François no faharoa avy any Arzantina nahakasika ny tànan'Andriamanitra. http://bit.ly/KpI47u
Na ilay mpanolotra fandaharana amin'ny TV monina any Etazonia, Piers Morgan (@piersmorgan), aza dia nanana ny azony lazaina mikasika ny baolina kitra ao Arzantina:
@piersmorgan: Manana ny N°1 Katolika, N°1 amin'ny mpanao baolina kitra eto ambonin'ny tany ankehitriy i Arzantina. #Bergoglio #Messi
Anatinà lahatsoratra matomatotra kokoa, nibitsika i Caren Kalafatich (@CarenKalafatich) [es] hoe :
@CarenKalafatich: Avy aty Arzantina izahay, io no antom-pahavelomanay: Mankalaza ny “Papa” izahay satria izy avy aty “Arzantina” ary tsy hiresaka an'i #Bergoglio amin'ny maha-olona sy lehilahy mpitahiry ny fomba azy izahay.
Marobe ireo mpampiasa twitter no manontany ny mety ho fandraisan'anjaran’ilay Papa vaovao tamin'ny Fitondrana Jadona tany Arzantina tamin'ny 1976-1983, tahaka an'i Guillermo Prein (@GuillermoPrein) [es]:
@GuillermoPrein: Ny Kardinaly #Bergoglio voafidy ho Papa na teo aza ny fandraisany anjara mbola tsy voazava hatrizao tamin'ny fanaovana jadona farany sy ny “fananganana fefy” hanafenana ny resaka fanolanan-jaza tahaka an'i Grassi